Mpanamboatra sy mpamatsy ampahany amin'ny kamiao - Fitaovana fivarotana kamiao ao Shina
Spline Spindle dia fampitana mekanika, lakile fandriam-pahalemana, lakile semicircular, oblique key function dia mitovy, ny famindrana torque mekanika, raha ny fisehon'ny zana-by dia manana lalantsara lavareny, napetraka eo amin'ny vatan'ny ampahany mihodina koa manana ny lalantsara mifanaraka amin'izany, dia afaka mitazona ny fihodinan'ny synchronous miaraka amin'ny zana-tsipika. Mandritra ny fotoana mihodinkodina, ny sasany dia mety koa mihetsiketsika amin'ny lavaka, toy ny gearbox shift gear, sns
Tube famafazana axle avo lenta
Tube Spindle dia ampahany manan-danja amin'ny fivorian'ny axle drive automobile, mamorona ampahany lehibe amin'ny trano famaky fiara izy, ka ny toerana misy ny familiana ny kodiarana fiara havia sy havanana dia raikitra, manohana ny volan'ny rafitra sy ny fivondronana miaraka, ary mitondra ny herin'ny fihetsiky ny arabe sy ny fotoana avy amin'ny kodiarana rehefa mitondra fiara ny fiara, ary mamakivaky ny fampiatoana mankamin'ny fefy.
Avo tsara kalitaona ampela Nify
ampela bazana dia karazana voanjo be mpampiasa amin'ny kamio, tranofiara ary indostria hafa. Avy amin'ny tovona pui- mamaritra ny fitaona ho avy mialohan'ny aôrisitry ny endriky ny atao, ny fototeny böt; ny tovana -of izay mamaritra ny mpanao (mpanao fahatelo amin'ny bika ambehivavy); ary ny tovana -s mamaritra ny ploraly
Fivarotana mafana S Head Brake Camshaft ho an'ny faritra mpamaky faritra
Ny camshaft S Brake ny CAM sy ny tsorakazo indrindra dia misy CAM ary tsorakazo, ny CAM dia mifamatotra amin'ny tsorakazo, izay miavaka amin'ny CAM mifangaro sy ny tsorakazo, ny fizarana mivelatra amin'ny CAM dia afovoany mitovy endrika symmetrika S, ary ny zana-kazo roa misy S dia ny afovoan'ny faribolana concentric CAM dia mihetsika. Ny CAM dia miorina amin'ny faran'ny tsorakazo. Noho izany dia mifanentana tsara amin'ny rafitra fanamafisam-peo izy, ary ny herin'ny fampitana dia mitovy amin'ny fizotry ny fifindrana ary ny fifandirana Ny coefficient dia kely, mba hampihenana ny hainganana sy ny rovitra amin'ny fizotran'ny fampiasana, halavaina ny androm-piainan'ny serivisy ary hampihena ny vidin'ny fikolokoloana. Etsy an-danin'izany, ny valin'ny famindrana camshaft karazana S dia tsara kokoa, afaka manome fahafaham-po ny filan'ny torsiam-pandefasana lehibe kokoa , tsara kokoa ny vokany azo ampiharina.